IHuawei P20 kunye neP20 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa | I-Androidsis
Emva kweenyanga zokulinda, Isiphelo esiphakamileyo sikaHuawei sinikezelwe ngokusemthethweni kumsitho obuseParis. Uphawu lwesiTshayina lubhengeze ekuqaleni konyaka ukuba luza kuzisa iimodeli zalo ezintsha kulo msitho, hayi kwi-MWC 2018 njengezinye iimveliso. Ekugqibeleni, imini ifikile. IHuawei P20 kunye neP20 Pro sele ziyinyani. Yintoni esinokuyilindela kwisiphelo esiphakamileyo?
Iifowuni ziye zavelisa izimvo ezininzi kwezi nyanga. Sikwazile ukufunda ezinye iinkcukacha, njengekhamera kathathu yeHuawei P20 Pro. Ke zezinye zeefowuni ekulindeleke kakhulu kulo nyaka. Okokugqibela, sele siyazi Ukucaciswa ngokupheleleyo kwezi modeli zimbini.
IHuawei ibheja kakhulu kwisiphelo esiphakamileyo kulo nyaka ngezi fowuni zintsha. Uphawu lwaseTshayina luthathe indawo enkulu ngenxa yomgangatho kubo. Ukubheja abafuna ukudibanisa indawo yabo kwintengiso kwaye babonise ukuba bayayazi nendlela yokwenza izixhobo ezikumgangatho ophezulu. Sikuxelela ngakumbi ngokukodwa malunga ne Ukucaciswa kwezi Huawei P20 kunye nePro Pro.
1 Ukucaciswa kweHuawei P20
1.1 Inotshi kunye noluvo olungaphambili lweminwe
2 Ukucaciswa kweHuawei P20 Pro
2.1 Ikhamera engemva kathathu
2.2 Ukuqwalaselwa kobuso
Ukucaciswa kweHuawei P20
Siqala ngefowuni enika igama layo kwisiphelo esiphakamileyo yohlobo lwaseTshayina lwango-2018. Imodeli epheleleyo ebonisa ukutsiba kumgangatho wenkampani xa kuthelekiswa nesiphelo sonyaka ophelileyo. Ngokubhekisele kuyilo akukho zinguqu zininzi okanye izinto ezimangalisayo. Kodwa inyani kukuba ayimfuneko kule meko. . Ezi zezi Ukucaciswa ngokupheleleyo kweHuawei P20:
Ukucaciswa kobuchwephesha beHuawei P20
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo ene-EMUI 8.2
Isikrini 5.8 intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo
Inkqubo I-Kirin 970 ine-cores ezisibhozo kwi-2.36 GHz
Ikhamera esemva 20 + 12 MP enezinto f / 1.6 kunye f / 1.8
Conectividad 4 × 4 MIMO Wifi LTE Ikati 18 Uhlobo lwe-USB C
Ezinye izinto Iscreen senwebu yeminwe yokubonwa kobuso
Ibhetri I-3.400 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ixabiso 649 euro
Inotshi kunye noluvo olungaphambili lweminwe
Ifowuni sele ibangele impikiswano ngokuvuza kwayo kokuqala, kuba ifowuni ayinotshi. Kule meko yi- inotshi encinci ngaphezu kokuba sifumana kwiimodeli ezinjenge-iPhone X. Ke oko kukhokelela kwiscylized ngakumbi. Ukongeza, ifuna ukusebenzisa iUkuziqhelanisa nezikrini ezinotshi eza kufika nge-Android P.
Uyilo lwale Huawei P20 lutsala umdla. Yintoni egqithisile, ifowuni idibanisa isivamvo somnwe ngaphambili. Iinkcukacha ezilindelwe ngabasebenzisi abaninzi. Ukongeza, le nzwa iya kuba nemisebenzi eyahlukeneyo njengokukwazi ukuhamba nayo.
Kuyamangalisa ubukho beqhosha langaphambili. Xa namhlanje sibona ukuba iintlobo ezininzi zibheja ekususeni. IHuawei iya kwelinye icala nesi sigqibo.
Ukucaciswa kweHuawei P20 Pro
Kwindawo yesibini sinefowuni enokuthi ivelise ezona zihloko ziphambili ngaphakathi koluhlu oluphezulu lwenkampani. Ukusukela ukubakho kwekhamera yayo kathathu ngasemva bekungumbandela wamagqabaza amaninzi. Ukongeza kuguquko kwimakethi ye-Android. Kuninzi okulindeleke kule fowuni. Ezi zezi Ukucaciswa ngokupheleleyo kweHuawei P20 Pro:
Ukucaciswa kobuchwephesha beHuawei P20 Pro
Umzekelo P20 Pro
Isikrini I-6.1 intshi ye-AMOLED ene-18.7: 9 ratio kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD + (2244 x 1080 pixels)
Inkqubo I-Huawei Kirin 970 ene-NPU yobukrelekrele bokufakelwa
Ikhamera esemva Kathathu i-40 MP RGB (f / 1.8) + 20 MP monochrome (f / 2.6) kunye ne-5 MP RGB telephoto (f / 2.4) kunye ne-OIS
Ezinye izinto Ukuqaphela ubuso bokufunda ngomnwe kwiscreen
Ibhetri I-4.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ikhamera engemva kathathu
Imodeli ebiza kakhulu kwezi zimbini kwaye igqibelele. Ifowuni ezinikele kumandla amsulwa kwaye apho ubukrelekrele bokufakelwa budlala indima yokuthatha isigqibo. Eyona nto ibalulekileyo kwifowuni ngaphandle kwamathandabuzo yikhamera yayo yangasemva. Kuba ifemu ikhethe ikhamera kathathu kule meko. Iilensi eziphambili zale Huawei P20 Pro sele iyi-40 MP. Ngelixa ezinye ziyi-20 + 5 MP. Isilo esikhulu ngale ndlela.
Nge #HuaweiP20Pro maak je ook 's nachts de mooiste foto's, dankzij de Hand Held Night Mode. Zonder statief wel verstaan ​​wena! pic.twitter.com/0fxJdOjCiw
-IHuaweiMobileNL (@HuaweiMobileNL) Matshi 27, 2018
Ke abasebenzisi baya kuba nakho ukuthatha imifanekiso emihle kuzo zonke iintlobo zeemeko kwaye Enkosi ngoncedo lobukrelekrele bokuzenzela, iziphumo ziya kuba mangalisa. Kwakhona kwiimeko zokukhanya okuphantsi okanye ukuba siza kuthatha ifoto kwimodi ye-portrait. Into uphawu lwaseTshayina olunelunda ngayo, kuba ngokuka Ibhentshi ye-DXOMark, ifowuni ifumana amanqaku abetha abo bakhuphisana nabo abaphambili kwimarike.
Inokwenzeka njani enye into, lIsiphelo esiphakamileyo sikaHuawei sisebenzisa ukubonwa kobuso. Nangona bekhethe inkqubo eyahlukileyo kunale siyibonayo kwiifowuni ezininzi ze-Android namhlanje. Kuba ayisebenzisi ikhamera yangaphambili. Endaweni yoko inenzwa yayo yokusebenza kwale nkqubo. Ke kukubheja okusondeleyo kwi-ID yobuso ye-iPhone X.
Nje ukuba iinkcukacha zeefowuni ezimbini zaziwe, imibuzo ezizigidi ezibini zeedola iya kuhlala iphendulwa. Baza kuba nexabiso elingakanani? Baza kukhutshwa nini ezivenkileni? Ngethamsanqa, sele sinayo impendulo kule mibuzo. Lo nto Siyawazi amaxabiso aza kuba nawo iHuawei P20 kunye neP20 Pro kwiinguqulelo zayo ezahlukeneyo. Sikuxelela ngakumbi ngezantsi.
Kwimeko ye-Huawei P20, kulindeleke ukuba ifike kwilizwe lethu ngexabiso lama-euro angama-649.. Izakufika ngemibala emine eyahlukeneyo kwintengiso: mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, pinki kunye neTwilight (ithoni exuba i-lilac kunye nohlaza kunye notshintsha umbala ngokuxhomekeke kwi-engile).
Khetha umbala owuthandayo.
Nokuba siphi na isitayile sakho, sine #HuaweiP20 iyakulingana. #YabonaMooore #OOO pic.twitter.com/k7DheZNkyH
-IHuawei Iselfowuni eSpain (@HuaweiMobileESP) Matshi 27, 2018
IHuawei P20 Pro iya kufumaneka ngemibala emine efanayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, iTwilight ime ngaphezulu kwayo yonke into, ebonakala ngathi iyaboyisa abasebenzisi. Njengoko kulindelwe, le modeli iya kubiza kakhulu. Kule meko uya kuba nefayile ye- ixabiso le-849 euros xa ifikelela kwiivenkile kwilizwe lethu.
Malunga nomhla wokukhutshwa kwayo, Ezi modeli zimbini kulindeleke ukuba zifike eSpain nge-13 ka-Epreli. Ngapha koko, kwiiwebhusayithi ezinjengeMediaMark sele zikhona ukugcinwa. Ukuqaliswa kwayo kuya kuba yinyani kwiiveki ezimbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei P20 kunye neP20 Pro: Isiphelo esiphakamileyo sikaHuawei silapha